CUA-NextA « Hackaton »: misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana | NewsMada
CUA-NextA « Hackaton »: misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana
Hotanterahina ny 12 ka hatramin’ny 14 marsa izao ao amin’ny Zone Futura Andranomena ny fifaninanana ara-nomerika “hackaton”, fiaraha-miasa amin’ny NextA. Fantatra izany, omaly, nandritra ny fampahafantarana ny fandraisan’anjaran’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ilay « Global Mayor Challenge ».
Misokatra ho an’ny mponin’Antananarivo rehetra ampy taona (18 taona mihoatra) ny fandraisan’anjara. Afaka mandeha irery na mivondrona ho ekipa dimy ny mpandray anjara. Efa nanomboka tamin’ny 1 marsa 2021 ny fisoratana anarana ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 9 marsa amin’ny 2 ora tolakandro.
Hatao ny 11 marsa kosa ny famoahana ireo ekipa 10 voafantina handray anjara amin’ny « Hackaton”. Ny 14 marsa kosa ny fanolorana ireo ekipa telo mpandresy amin’ity fifaninanana “Hackaton” ity. Izy ireo no afaka mandray anjara amin’ny “Global Mayors Challenge”. Vola 1 tapitrisa dolara no loka atolotry ny fikambanana Bloomberg ho an’ny tanàn-dehibe izay tafakatra, mba hahafahana manatontosa ny tetikasa.
Tsiahivina fa fandraisana anjara voalohan’ny CUA amin’ny “Global Mayors Challenge”, izay fifaninanana eo amin’ny tanàn-dehibe iraisam-pirenena, hahafahan’ny CUA mitondra ny tetikasany ho fanatsarana ny tanàn-dehibe ity fifaninanana ity. Lohahevitra nosafidina manokana amin’ity taona ity ny fifamoivoizana an-tanàn-dehibe sy ny fomba fiatrehana ny Covid-19. Tanjona ny hanandratra ireo olona manan-kevitra sy mahay mamorona eto an-dRenivohitra ho fampiroboroboana sy ahafahana manampy azy ireny hisondrotra eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.